Email Vidio: Oge eruola maka ire ere iji nweta nkeonwe | Martech Zone
Monday, March 23, 2020 Bọchị Sọnde, Machị 29, 2020 Douglas Karr
Site na nsogbu COVID-19, ikike nke ndị na-ere ahịa n'èzí iji nwee njikọ onwe onye na atụmanya ha ma wepụrụ ndị ahịa n'otu ntabi anya. M kwenyesiri ike na okwukwe aka na aka bụ ihe dị mkpa n'usoro ire ahịa, ọkachasị na njikọ aka ka ukwuu. Ndị mmadụ ga-enwerịrị ike ịlerịta onwe ha anya ma gụọ asụsụ ahụ iji nwee ntụkwasị obi na ego ha na-eme na onye ha na ha na-ahọta.
Iji mee ka ihe sie ike, ọdịnihu nke akụ na ụba anyị bụ ajụjụ. N'ihi ya, ahịa otu na-adọga imechi amụọ… ma ọ bụ ọbụna na-ụlọ ọrụ na-aza. Ana m arụ ọrụ na mmalite ugbu a na ọtụtụ narị puku dollar ndị siri ike na pipeline… na nkwekọrịta mbụ anyị emeela ka ụbọchị ahụ kwụsị. Nyere na anyị na-enyere ụlọ ọrụ aka na akpaaka na mwekota, ọ bụ oge siri ike kemgbe anyị maara na anyị nwere ike inyere ha aka.
Vidio maka nyiwe Ahịa
Nke ahụ kwuru, anyị na-emejuputa ya video email ngwọta iji nyere ndị ahịa anyị aka ka ha meziwanye njikọ ha na atụmanya na ndị ahịa. Vidio adịghị atụnyere mmadụ, mana ọ na-enye ohere na-adọrọ mmasị karị ịgwa onwe gị okwu na atụmanya ma ọ bụ onye ahịa.
Vidio maka nyiwe ire ere nwere ụfọdụ atụmatụ nkịtị:
Record - dekọọ vidiyo ahaziri iche site na desktọọpụ, ngwa mgbakwunye ihe nchọgharị, ma ọ bụ ngwa mkpanaaka.
Mmekọrịta CRM - Dekọọ email na ndu, kọntaktị, akaụntụ, ohere, ma ọ bụ ikpe.
Enhancement - dezie vidiyo ma tinye mkpuchi na nzacha.
mata - nyochaa ezigbo oge vidiyo na-etinye aka ma nata ihe ngosi.
peeji nke - ntinye peeji nke ihu igwe iji lelee ma zaghachi vidiyo. Ọbụna ụfọdụ nwere ijikọkọta ọnụ dị iche iche maka ịhazi oge.
Report - tụọ arụmọrụ na Akụkọ ọdịnala na Dashboards.
Ndị a bụ nyiwe ndị kachasị ewu ewu:
BọmBọm - Jiri ngwa ngwa dekọọ, zipu, ma soro ozi ịntanetị vidiyo iji pụta na atụmanya gị ', ndị ahịa' na ndị ọrụ '.
Kovideo - Dekọọ ma zipụ vidiyo nke ahaziri ahazi nke na-eme ka ọnụọgụ nzaghachi ka mma, na-abawanye ohere ire ahịa yana mechie azụmahịa ndị ọzọ
Dubb - Mee ka azụmahịa gị na ibe vidiyo vidiyo nwere ike izipu ebe ọ bụla na nlele GIF.
Efu - Iziga a ekwe bụ ịrụ ọrụ nke ọma karịa dee ogologo ozi ịntanetị ma ọ bụ nọrọ ụbọchị gị na nzukọ na-enwe mkparịta ụka na-adịghị mkpa na-eme na ozugbo.
OneMob - Ngwa ngwa mepụta peeji nke ihe di n’ime tinye aka atụmanya, ndị ahịa, ndị mmekọ na ndị ọrụ
UBANYERE - vidREACH bụ ozi-e vidiyo nke ahaziri ahazi na nkere ahịa nke na-enyere aka azụmaahịa tinye ndị na-ege ha ntị, weta ndị ọzọ na-eduga ma mechie azụmahịa ndị ọzọ.
Vidio maka Ahịa Ahịa
Igbe igbe onye ọ bụla na-agbago elu ugbu a ma ndị mmadụ na-enwe oge siri ike nyochachaa ihe nwere ike inye ọrụ ha uru. Nke a bụ ndụmọdụ onwe m banyere iji vidiyo maka ahịa:
Nweta Isiokwu - Etinye video na isiokwu gị na uru ị na-eweta.
Dị Bọọ - Ekwela oge ndị mmadụ. Mee ihe ị ga-ekwu ma banye kpọmkwem n'isi ihe ị na-ekwu.
Nye Uru - N'oge ndị a na-ejighị n'aka, ịkwesịrị inye uru. Ọ bụrụ na ị na-achọ ịre ahịa, ị ga-eleghara ya anya.
Nye Enyemaka - Nye ohere maka olile anya gị ma ọ bụ onye ahịa gị ịgbaso.
Equipment - Jiri igwefoto weebụ dị mma na igwe okwu. Ọ bụrụ n’inweghị ezigbo igwe okwu, ekweisi na-arụ ọrụ oge niile.
Ekwentị mkpanaaka - Ọ bụrụ na ịdekọ site na mkpanaka, gbalịa ịdekọ na ọnọdụ ihu igwe ebe ndị mmadụ ga-emeghe nke a na email ha, ikekwe na desktọọpụ ma ọ bụrụ na ha nọ n'ụlọ ọrụ ụlọ ha.
Uwe maka ihe ịga nke ọma - Ọsụsọ na uwe ogologo ọkpa yoga nwere ike ịbụ uwe kacha mma n’ụlọ, mana iji gosipụta obi ike, oge eruola ịsa ahụ, ịkpụ afụ ọnụ, na ejiji maka ọganiihu. Ọ ga - eme ka ị nwekwu obi ike na onye nnata gị ga - enwe nnukwu mmetụta.
Mụrụ - Eguzola n'ihu mgbidi ọcha. Otu ọfịs nwere ụfọdụ omimi na agba ọkụ n’azụ gị ga-abụ nke na-adọrọ adọrọ karị.
Video maka Ahịa Ihe Nlereanya
Nke a bụ ihe atụ nke vidiyo mdekọtara dị ka ngosipụta maka isiokwu a:
Tags: BọmBọmmwekota crmonemobvideo maka ahịavidiyo maka nyiwe ire erevideo na emailNjikọ YouTube